PUNTALND 'oo dagaal uga hortageysa' qorshe xasaasi ah oo ay waddo Somaliland - Caasimada Online
Home Warar PUNTALND ‘oo dagaal uga hortageysa’ qorshe xasaasi ah oo ay waddo Somaliland
PUNTALND ‘oo dagaal uga hortageysa’ qorshe xasaasi ah oo ay waddo Somaliland
Hargeysa (Caasimada Online) – Maamulka Puntland ayaa Ciidamo fara-badan ku daabulay magaalada Badhan ee gobolka Sanaag, oo muddooyinkii dambe ay ka taagneyd xiisad xoogan, kadib markii Somaliland ay ka bilowday dhaq-dhaqaaqyo cusub oo siyaasadeed.
Ciidamadan oo ka tirsan kuwa daraawiishta ayaa waxay ka hortagi doonaan dhaq-dhaqaaqyada Somaliland ee gobolka Sanaag, gaar ahaa magaalada Badhan, iyaga oo qeyb weyn ka qaadan doona sugida amniga oo maalmihii u dambeeyay laga dareemayay amni darro.
Sida ay ogaatay Caasimada Online, ciidamadan cusub ayaa waxa uu maamulka Puntland uga hortagi doona qorshe ay wado Somaliland, kaasi oo ku aadan sidii deegaanadaas looga bilaabi lahaa cod-bixinta doorashooyinka Somaliland.
Puntland ayaa sidoo kale shaqo joojin ku sameysay qaar kamid ah ciidamada booliska ee ka howl-galayay magaalada Badhan, kadib markii ay dhaq-dhaqaaqyo siyaasadeed ka bilowday Somaliland, taasi oo ay wax ka qaban waayeen.
Gobolka Sanaag ayaa waxa laga dareemaya xiisad ka dhex aloosan maamulka Puntland iyo Somaliland, kuwaasi oo sanadihii lasoo dhaafay ku dagaalamay gacan ku haynta deegaano ay ku muransan yihiin labada maamul.
Arrintan ayaa imaneysa, xili ay xukuumadda Somaliland u diyaar garoweyso qabashada doorashooyinka golaha wakiilada iyo dowladaha hoose, kuwaasi oo ay rabto inay ka qabsoomaan gobolka Sanaag oo deegaano kamid ah ay isku hayaan Puntland.